NTUZIAKA EXCEL - EXCEL - 2019
Iji nkwekọrịta na Microsoft Excel
Ụfọdụ ndị ọkachamara kwenyere na onye ọbụla na nyocha ahụ na-eme nwayọ nwayọọ na-emegharị ma ọ bụ, ọzọ, ọ na-eme ngwa ngwa. Ndị ọrụ ndị ọzọ nwere ajụjụ gbasara ọsọ nke mkpọchi na ngwaọrụ a ma ọ bụ ngosipụta nke ijegharị nke wiil na ihuenyo ahụ. Enwere ike idozi ajụjụ ndị a site n'ịgbanwe ntụgharị uche nke òké. Ka anyị lee otú e si eme nke a na Windows 7.
Ngwa nhazi "Ntu" nwere ike ịgbanwe ntụgharị uche nke ihe ndị a:
Ka anyị lee otú e si arụ ọrụ a maka nke ọ bụla n'otu n'otu.
Gbanwee iji kpoo ihe onwunwe
Iji hazie ihe niile dị n'elu, mbụ ị ga-aga window nke òké Njirimara. Anyị ga-aghọta otú e si eme ya.
Pịa "Malite". Banye "Ogwe njikwa".
Gaa na ngalaba "Akụrụngwa na ụda".
Na windo meghere na ngọngọ ahụ "Ngwaọrụ na ndị na-ebi akwụkwọ" pịa "Nta".
Maka ndị ọrụ ahụ na-amaghị na ịnyagharịa na wilds "Ogwe njikwa", e nwekwara ụzọ dị mfe iji gbanwee windo ụlọ ngwongwo. Pịa "Malite". Pịnye okwu na mpaghara ọchụchọ:
N'ime nsonaazụ ọchụchọ na ngọngọ ahụ "Ogwe njikwa" a ga-enwe mmewere nke a na-akpọ ya "Nta". Ọtụtụ mgbe ọ bụ n'elu ndepụta. Pịa ya.
Mgbe ịmechara otu n'ime arụmọrụ algorithms abụọ a, a ga-emeghe windo nke oghere imeghe n'ihu gị.
Mgbanwe ntụgharị uche na-arụ ọrụ
Nke mbụ, ka anyị chọpụta otú ị ga-esi gbanwee ihe ndị a na-ahụ anya, ya bụ, gbanwee ọsọ nke ọkpụkpọ kọlụm nke metụtara nsụgharị òké na tebụl. Nke a bụ isi nwere mmasị na ọtụtụ n'ime ndị ọrụ na-echegbu onwe ha banyere okwu ahụ e welitere n'isiokwu a.
Bugharịa na taabụ "Ogwe njedebe".
Na ngalaba mepere emepe nke ihe onwunwe na nghazi ntọala "Ịkwaga" enwere ihe nlele a na-akpọ "Mee ngwa ngwa". Site na ịdọrọ ya n'aka nri, ịnwere ike iwelie ọsọ nke ije nke cursor dabere na mmegharị nke òké na tebụl. Na-abanye ihe mmịfe a n'aka ekpe, kama nke ahụ, na-ebelata ọsọ nke cursor. Gbanwee ọsọ ka o wee dịrị gị mfe iji ngwaọrụ nhazi. Mgbe ịchisịrị ntọala ndị dị mkpa, echefula ịpị bọtịnụ ahụ. "OK".
Mgbanwe nhazi nke wheel
Ị nwekwara ike ịhazigharị nlezianya nke wiilị ahụ.
Iji mee nhazi na ịmepụta ihe kwekọrọ na ya, gaa na akụrụngwa taabụ, nke a na-akpọ "Ugbo".
Na ngalaba nke na-emepe, e nwere ihe abụọ nke parameters a na-akpọ "Ntugharị ihuenyo" ma Ntughari na-agagharị. Na ngọngọ "Ntugharị ihuenyo" site na ịgbanwuo bọtịnụ redio, ọ ga-ekwe omume ịkọwa ihe kpọmkwem ga-agbaso ntụgharị nke wiilị otu pịa: pịgharịa ihu na ihuenyo n'otu ihuenyo ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ a kapịrị ọnụ. N'okwu nke abụọ, n'okpuru nhazi, ị nwere ike ịkọ nọmba ọnụgụ mpịakọta site na ịpị nọmba site na keyboard. Ndabara bụ mpaghara atọ. Lee kwa nnwale iji gosipụta uru dị mkpa maka onwe gị.
Na ngọngọ Ntughari na-agagharị ka mfe. N'ebe a, ị nwere ike itinye nọmba akara ngosi mpịakọta mgbe ị na-agbanye ụkwụ na ụkwụ. Ndabara bụ ihe atọ.
Mgbe ịmechara ntọala na mpaghara a, pịa "Tinye".
Gbanwee mmetụta nke bọtịnụ
N'ikpeazụ, leba anya n'otú e si edozi bọtịnụ òké.
Bugharịa na taabụ "Bọtịnụ ọchị".
N'ebe a, anyị nwere mmasị na ngọngọ kachasị. "Pịa ugboro abụọ". N'ime ya, site na ịdọrọ ihe mmịfe ahụ, oge etiti n'etiti bọtịnụ na bọtịnụ ka edoziri ka ọ dị ka okpukpu abụọ.
Ọ bụrụ na ịdọrọ ihe mmịfe ahụ gaa n'aka nri, iji pịa ka a ga-ele ya anya dịka okpukpu abụọ, ị ga - eme ka ibelata oge n'etiti bọtịnụ bọtịnụ. Mgbe ị na-adọrọ ihe mmịfe ahụ gaa n'aka ekpe, kama nke ahụ, ị ​​nwere ike iwelie ohere n'etiti pịa na pịa-pịa ka ga-agụta.
Iji hụ otú usoro ahụ si emeghachi ọsọ ọsọ abụọ gị na ọnọdụ ụfọdụ na-agba ọsọ, pịa okpukpu abụọ na akara ngosi nchekwa dị na nri nke ihe nkwụsị.
Ọ bụrụ na emeghere folda ahụ, ọ pụtara na usoro gụrụ ọnụọgụ abụọ ị mere dịka ọnụọgụ abụọ. Ọ bụrụ na katalọgụ ahụ nọgidere na-emechi emechi, mgbe ahụ ị kwesịrị ibelata oge n'etiti etiti, ma ọ bụ dọrọ ihe mmịfe ahụ gaa n'aka ekpe. A họọrọ nhọrọ nke abụọ.
Mgbe ịhọrọla ezigbo ọnọdụ nke ihe mmịfe ahụ, pịa "Tinye" ma "OK".
Dị ka ị nwere ike ịhụ, gbanwee mmetụta nke ihe dị iche iche nke òké ahụ adịghị mfe. A na-arụ ọrụ maka ịkpụzi ndị na-arụ ọrụ, na wiil na bọtịnụ na windo nke ụlọ ya. N'okwu a, nkatọ bụ isi maka nụgharịrị bụ nhọrọ nke parameters maka mmekọrịta na ngwaọrụ nhazi nke otu onye ọrụ maka ọrụ kachasị mma.